संयोजक कार्कीलाई तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७५, २३ फागुन बिहीबार २१:३७ March 7, 2019 445 Views
काठमाडौँ : अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय संयोजक राजु कार्कीलाई तीन दिनभित्र लिखित जबाफसहित उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कार्कीकी पत्नी पवित्रा केसीले बुधबार दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि बिहीबार प्रारम्भिक बहसपछि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा महानगरीय परिसर टेकुलाई उक्त आदेश दिएको हो ।
ने.क.पा.का नेतासमेत रहेका कार्कीलाई यही मङ्गलबार राजधानीको सामाखुसीस्थित डेराबाट दिउँसो १२ बजेतिर सादा पोसाकका प्रहरीको टोलीले गिरफ्तार गरेको थियो । कार्कीलाई अहिले टेकु प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ ।
बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल र राजु अधिकारीले पैरवी गरेका थिए । संयोजक कार्की यसअघि पटकपटक गिरफ्तार पर्दै र रिहा हुँदै आएका थिए । महासङ्घ ने.क.पा. निकट किसानहरूको सङ्गठन हो ।
पछिल्लो समयमा सरकारले ने.क.पा. र तिनका जनवर्गीय सङ्गठनका नेता, कार्यकर्ताका साथै समर्थकमाथि समेत धरपकड शृङ्खला बढाउँदै लगेको छ । त्यसविरुद्ध ने.क.पा.ले पनि विभिन्न किसिमका आन्दोलन चलाउँदै दमन र गिरफ्तारीको घोर विरोध गर्दै आएको छ ।
बिहीबार मात्र प्रहरीले ने.क.पा.ले तालिम सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाउँदै कपिलवस्तुको शिवगढीस्थित सिम्बरी गाउँलाई रातिदेखि नै घेरा हाली तलासी लिएको छ । त्यसबेला बिनाकारण खानतलासी गरेर सर्वसाधारणलाई आतङ्कित बनाएको भन्दै स्थानीयले प्रतिरोध गरेका छन् । जनप्रतिरोधपछि प्रहरी टोली पछि हटेको थियो ।